Eo am-pitendrena i Torkia…. ny vehivavy sy ny fiainana andavanandro sy resaka hafa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2019 7:56 GMT
Tongasoa indray eto amin'ny tontolon'ny bilaogy Torkia! (na ny fizarana kely amin'izany…)
Tamin'ity herinandro ity i Phanja avy ao amin'ny The Need to Know nanoratra momba ny fiovana tanteraka amin'ny fomba fijerin'ny antoko momba ny zom-pirenena Tiorka. Nanambara i Recep Tayyip Erdogan vao haingana fa “Olom-pirenen'ny repoblikan'i Torkia avokoa isika eo ambanin'izany famantarana ambony izany… Na izany aza, manana “zana-maripanondroana ny Tiorka rehetra”. Fanovana fomba fijery lehibe izany, araka ny fomba fijery nentin-drazana ara-politika, ny famantarana Tiorka no hany famantarana ao amin'ny Repoblikan'i Torkia, ary mitsikera mafy ny governemanta am-perinasa noho izany fanambarana manokana izany ireo nasionalista hiringiriny. Noresahana tamin'ny fanampin’ ny “Eo am-pitendrena i Torkia” tamin'ny herinandro lasa tao amin'ny Global Voices ihany koa izany lohahevitra izany ary mino aho tsy ity no farany handrenesana momba izany.
Tamin'ity herinandro ity ihany koa i Talking Turkey namoaka lahatsoratra momba ny rafitra Akimbo izay tolotra angatahana manome fandaharana Tiorka any amin'ny kaontinanta Amerikana Avaratra ary koa nanoratra fisaorana ho an'ny Global Voices noho ny fitantarana ny tranokalany. Mahasoava ry Metin!
Mustafa Akyol avy ao amin'ny The White Path nandefa rohy mankany amin'ny lahatsorany “Under God or Darwin” izay navoaka voalohany tao amin'ny National Review Online.
Amerikan Turk nandefa lahatsoratra momba ny Tilikambo avo dia avo Dubai natolotra any Istanbul ary rohy mankany amin'ny Kanun namidiny izay namboarin'ny rainy. Raha tsy fantatrao ny atao hoe Kanun, dia jereo azafady ny lahatsorany ary hahita lahatsary misy ny iray lalaovina ianao (mahafinaritra izany).
Sahirankirana i Erkan avy ao amin'ny Erkan's Field Diary tamin'ity herinandro ity satria tany Washington DC namonjy fihaonambe, nomena ny lohateny hoe “Ny fomba nanovan'ny dingana mankany amin'ny fidirana Vondrona Eoropeana ny fifanarahana sy ny ezaka nataon'ny firenena-fanjakana Tiorka”, sady manome antsika topi-maso momba ny fikarohana nataony, ary raha manam-bintana, dia mety handefa ny ampahany amin'ny famelabelarana nataony ho tombontsoan'ny mpamakiny isan-kerinanandro izy. Na dia feno aza ny fandaharam-potoanany, dia mbola afaka nandefa vaovao sy rohy momba ny fihaonambe momba ny horohoro tany Ankara, ary manome antsika sary vitsivitsy sy fanehoan-kevitra tamin'ny lalao baolina fandaka vao haingana nifanaovan'i Fenerbahce sy Galatasaray (Fenerbahce no nandresy tamin'izany).
Turkish Torque mitantara indray ny sarinady tamin'ity herinandro ity, ireto ny songadina vitsivitsy : Anarambolana amin'ny taona amin'ny tenim-paritra Gagavuz, Tiorka Ortodoksa Kristiana niparitaka teo amin'i Romania, Okraina, Bolgaria sy Torkia ny Gagavuz; dika ho amin'ny teny anglisy ny poezian'i Necati Cumali; ary rohy mankany amin'ny fanadihadiana momba ny politikan'ny Oniversiten'i Princeton Hatramin'ny “Tafio-drivotry ny tanihay” ka hatramin'ny “tafio-drivotra metaly”: Ahoana no nanimban'i Iraka ny fifandraisana Torkia-Etazonia“. Misy ihany koa lahatsoratra iray mahaliana mizara 3 miresaka sary natonta tao amin'ny gazety Hurriyet izay nampiseho ny vadin'ny minisitry ny Fitaterana AKP, Binali Yildirim, Semiha Hanim (manao hijab), nipetraka irery eo ankilan'ny latabatry ny lehilahy ahitana ny vadiny nipetraka nisakafo. Niteraka savorovoro izany satria mampiseho mazava ny fikasana kely hitady fanamaoderina fiainana. Namoaka fanambarana i Semiha Yildirim fa safidiny manokana ny hipetra-drery ary nasaina izy hipetraka teo amin'ilay latabatra. Manontany i Torque hoe ahoana marina no ahafahan'ny vehivavy mpandala ara-pivavahana ao Torkia ho lasa mahay sy ho lasa mpikambana malaza ao amin'ny fitondrana raha tsy avela hianatra any amin'ny oniversite izy ireo satria manao voaly.
Metroblogging: Istanbul manoratra momba ny lala-mihantona (téléphérique) ho an'ny mpizahatany vaovao ao amin'ny distrikan'i Eyup Sultan, toerana mistika ao Istanbul.
Ary farany ho an'ny androany, ity misy zavatra vitsivitsy avy amin'i Mavi Boncuk: sary ara-tantara misy ireo vehivavy Turkmen, rohy mankany amin'ny zana-bilaogy vaovao mifantoka amin'ny sakafo Tastes of Mavi Boncuk, boky fanadihadiana momba ny “Mpanao mofomamin'ny Mpanjaka any Atsinanana” nosoratan'i Friedrich Unger, Mpanao vatomamin'ny mpanjaka Otto I tao Gresy, ary famaritana ny Baba Himmet, aloka Tiorka milalao an'i Karagoz.
Fahitana mahaliana tamin'ny herinandro tamin'ny fikarohako tamin'ny alalan'ny tontolon'ny bilaogy Tiorka mivoatra hatrany:
1. Turcopundit, namoaka rohy mankany amin'ireo vaovao/lahatsoratra rehetra sns izay mikasika an'i Torkia amin'ny andro iray, araka ny azonao an-tsaina, mila asa be izany ary miharihary raha tsidihana ity tranonkala mahafinaritra ity.
2. Mitovy amin'ny tranonkala voalaza eto ambony ny Turkish Digest.